Ra’iisul Wasaara Khayre oo daah-furay Golaha Dhaqaallaha Qaranka+Sawirro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Ra’iisul Wasaara Khayre oo daah-furay Golaha Dhaqaallaha Qaranka+Sawirro
Ra’iisul Wasaara Khayre oo daah-furay Golaha Dhaqaallaha Qaranka+Sawirro
August 11, 2018 - By: Mjama
Ra’iisul Wasaaraha Xukuummadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta daah-furay golaha dhaqaalaha qaranka oo madaxweynaha dalku Dekareeto ku magacaabay July 12, 2018, kaas oo dawladda kala talinaya arrimaha dhaqaalaha dalka iyada oo lagu salaynayo cilmi baaris dheer iyo cadaymo, sidoo kalana dawladda siinaya talo iyo hagid ku aadan diyaarinta iyo dhaqan-galinta siyaasad dhaqaale oo tayo leh oo ka caawinaysa isku-dubaridka khayraadka dalka iyo dibadda iyo fulinta qorshayaasha dhaqaalaha iyo maaliyadda dalka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa golaha dhaqaalaha qaranka kula dardaarmay in ay si qoto dheer uga fekeraan una dejiyaan siyaasado iyo istiratiijiyado looga faa’iidaysan karo khayraadka ballaaran ee Alle ku manneystay Soomaaliya.
“Waxa aan ku faraxsanahay in daah-furkaan golaha dhaqaalaha qaranka uu ku soo beegmay xilli aan guulo fara badan kasoo hoynay dhanka maamul wanaagga maaliyadda qaranka oo wadanku rajo wayn ka qabo in uu soo buuxiyo dhammaan shuruudihii lagaga saamixi lahaa daymaha. Waxan kalsooni weyn ku qabaa in golahaan uu kusoo biirin doono geedi socodkaas fir-fircooni si loo gaaro isku filnaansho dhaqaale iyo in ay Soomaaliya soo ceshato kaalintii ganacsi ee ay ku laheyd dunida” ayuu sheegay Ra’iisul Wasaare Khayre.
“In kasta oo ay tahay dhammaan mas’uuliyad na wada saaran hadana golaha dhaqaalaha qaranka ee aan maanta daah-fureyno ayaa hormuud ka noqon doona sare u qaadista dakhliga soo gala qof walba oo Soomaali ah loona abuuro shaqooyin cusub si xal waara loogu helo dhallinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la’aantu haysato. Sare u qaadista celceliska dakhliga soo gala qofkiiba waxa lagu gaari karaa in la kordhiyo saacadaha shaqada, la tayeeyo shaqaalaha ayada oo la tabo-barayo lana siinayo agabka u saamaxaya in ay gutaan waajibaadkooda si loo helo cudud shaqaale sare u qaadi kara dakhliga lehna xirfadihii iyo aqoontii loo baahna”, ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in ay Muhiim tahay in maal-gelin lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan kuwa isku xira dhul-beereedka iyo caasimadda, ayna dhimayso qiimaha dalagga, sarana u qaadeyso wax soo saarka dalka, sidaa darteed dawladda Federaalka Soomaaliya ay ka go’antahay xoraynta deegaannada wax soo saarka beeraha iyo xoolaha caanka ku ahaa si loogu soo xiro dhaqaalaha rasmiga ah ee Soomaaliya.
“Golaha dhaqaalaha qaranka waa in uu dhaxda u xirtaa sidii loo xaqiijin lahaa in wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ay gaaran heer lagu faani karo. dhaqaalaha Soomaaliya waxaa laf-dhabar u ahaa welina u ah wax soo saarka beeraha iyo xoolaha. Wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ma gaarsiisna heerkii loo baahna waayo wali waxaa liita dhoofinta wax soo saarka beeraha”.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay, “Waxaa kaalin muhiim ah kaga jiro dhaqaalaha Soomaaliya soo saaridda kheyraadka badda ee loo yaqaan ‘Blue Economy’. Waa muhiim ah in Soomaaliya ay safka hore ka gasho waddamada sida sare uga faa’iidaysto badahooda maadama aanu nahay waddan leh xeeb aad u dheer, badda Cas iyo badweynta Hindiyana aanu xuduud dheer la wadaagno, khayraadka badda Soomaaliya waxaa lagu tilmaama dhab ahaanna yahay mid ka mid ah kuwa ugu tayo iyo tiro badan aduunka. Ka faa’iidaysiga khayraadka badda waa in la siiyo ahmiyad gooni ah si looga faa’iideeyo dadka Soomaaliyeed ee tabalaysan”.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali khayre ayaa sheegay in Soomaaliya lagu sifeeyay gaajo, qarax, afduub iyo burcad-badeednimo ayna uuhiim tahay in waqti iyo kheyraad badan la geliyo si magaca Soomaaliya looga dhigi lahaa mid muujinaya dhaqaala soo koraya, nabad ah, xasilloon, iyo dal loo dalxiis tago, waxa uuna ku baaqay in dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan hey’adaha dowliga ah ee ku howlan horumarinta dhaqaalaha.
“Si sare loo qaado dakhliga celcelika soo gala qof walba oo Soomaali ah, si loo kobciyo wax soo saarka beeraha iyo xoolaha, si looga faa’iideyso kheyraadka badda, shidaalka iyo macdanta kale, si loo gaaro isku filnaasho dhaqaale, dhallintana loogu abuuro shaqo, Waa in aan garab siinnaa hey’adaha dowliga ah ee ku howlan horumarinta dhaqaalaha. Waxan kalsooni buuxda ku qabaa in ay Soomaalia soo kabaneyso, adinkana aad arrimahan culus ee idin horyaallo aad ka soo dhalaali doontaan”.
Golaha dhaqaalaha qaranka oo uu hogaaminayo madaxweynha dalka, Ra’iisul Wasaaruhuna uu bedel u yahay Madaxweynaha, waxaa xubna ka ha guddi-hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wasiirada, madaxda dawlad goboleedyada, gudoomiyaha bangiga dhexe, shan xubnood oo madax bannaan kuwaas oo leh khibrado iyo xirfado dhaqaale, Maamul Maaliyadeed, Dowladeed, daah-furnaanta iyo hufnaanta ama aqoon kale oo la xiriirta leh waxaana sidoo kale la shaqeynaya afar dhaqaale yahan oo aan Soomaali aheyn.
Share Your Comments & Feedback:
Wararka u danbeeyey
Culumada Soomaaliyeed Baaq u Diray Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Siyaasiyiinta [BAYAAN]
April 23, 2019 By HORSEED STAFF
Madaxweyne Deni oo Ka Codsaday Sucuudiga Inay Gacan Ka Siiyaan Amniga iyo Dhaqaalaha
Madaxweyne Farmaajo iyo Dhiggiisa Dalka Masar oo ka wada hadlay xaaladda Soomaaliya
Sucuudiga oo Dil Ku Fuliyay 37 Qof oo Argagixiso Lagu Eedeeyay
Dhaliilo laga keenay shirkii Nairobi ee Siyaasiyiinta Mucaaradka ah -COD
April 23, 2019 By Abdirisak Faamoos
Saudi Arabia executes 37 citizens for terrorism
Copyright © 2019 Horseed Media